Sideen si buuxda ugu qarin karaa Folder Aragtida - Liiska Faylka Fudud
Waa tan xeelad nadiif ah oo aad isticmaali karto haddii aad rabto inaad gebi ahaanba qariso galka, labadaba hore iyo gadaal.
U gudub galka aad rabto inaad qariso adoo adeegsanaya FTP ama arjiga maamulaha faylkaaga martigeliyahaaga. Hubso in goobta ay ku taal “Waxyaabaha Qarsoon ee Muujiya” ay daaran tahay. Waa inaad awood u yeelatid inaad aragto feylasha .thumbnails.
Dib u magacow faylkan, adoo ku daraya hal dhibic xaga hore ee magaca.
Dhibaatada-PDF-yada (La arki karo)
Mar alla markii aad dib-u-baarto liiska ama aad dib u buuxiso bogga liistada faylka, galkaan ayaa laga saarayaa keydka oo Faylka Fudud ee Fudud ayaa hadda iska indhatiraya galkaan. Weli waad ka heli kartaa barta hadda aad joogto, oo markii aad dib u magacawdo, waxay markale ka muuqan doontaa liiskaaga.
Tani way fiicnaan kartaa haddii aad u baahato inaad si ku meelgaar ah u qariso galka.